Manao Antoka Ny Hoaviny i Japàna, Tiany Kokoa Ny Fandrosoana Miohatra amin’ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Manao Antoka Ny Hoaviny i Japàna, Tiany Kokoa Ny Fandrosoana Miohatra amin'ny Tontolo Iainana
Voadika ny 04 Jolay 2019 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, ਪੰਜਾਬੀ, Français, Español, русский, नेपाली, English, English
Tondradrano tao amin'ny fiantsonan'ny lalamby ambanin'ny tany ao Nara, Japana, tamin'ny fanatonan'ilay rivomahery tamin'ny taona 2014. Ny taona 2018, niaina toetrandro nisy rivomahery nahery vaika indrindra i Japana, narahina tondradrano sy tafio-drivotra nandravarava izay namotika ny ampahany betsaka tamin'ny faritra andrefan'i Japana nandritra ireo telo volana farany. SARY James Gochenouer (CC BY 2.0)
Ny fahavaratra lasa teo, tao anatin'ireo tahotra ny mety hiakaran'ny maripàna rehefa fahavaratra, ho tonga 45 degre tsy mbola fandre hatrizay manerana ny firenena, ny hazakazaka mankany amin'ny fifikirana amin'ny nentin-drazana no ilofosan'ny Praiminisitra Japoney.
Ho an'ny Filoham-pirenena nivoaka, Abe Shinzo, nilaina ilay dingana mba hanamafisana ny tsy fivadihan'ny Antoko liberaly demaokraty. Ilainy ny mahazo antoka fa ny fanekem-panompoan'ireo rantsana rehetra dia tsy niova taorian’ireo tantara ratsy marobe nifamatotra tamin'ny manodidina azy akaiky, nandritra ny fepotoana faharoa nitondràny. Saingy raha ny fahitàna azy, very ny hafetsifetsen'ny tantara ratsin'i Moritomo Gakuin, izay ninoana fa nanohanan'ny Praiminisitra, tamin'ny fomba miafina, ny fanamboarana tranoben'ny sekoly iray an'ny antoko farany havanana ao Osaka, natsangana mba hamelomana ny fiankohofana amin'ireo amperora sy ny fanabeazana ara-miaramila, . Ary na teo aza ireo fitsapankevitra sy ireo famotopotorana mampiseho fa miahiahy ny Praiminisitra ho nanàla baraka ny fotokeviny tamin'ny Moritomo sy ireo tantara ratsy hafa ny vahoaka, nandresy azy lavitra ‘i Abe.
Andro vitsivitsy taorian'ny fandreseny, namoaka lahatsoratra iray i Abe tao anaty Financial Times any UK. Mitondra ny lohateny hoe “Miaraha amin'i Japana ary mihetseha ankehitriny mba hiaro ny planetantsika“, nasain'ilay lahatsoratr'i Abe ireo mpamaky mba hiady amin'ny fiovan'ny toetrandro, nefa na ny mpitantana azy aza mahagaga fa miasa ho amin'ny fametrahana an'ireo ivontoerana famokarana herinaratra mandeha amin'ny arintany mitera-doza.
Hokuriku Denryoku toerana mpamokatra angovo mandeha amin'ny arintany, Tsuruga. Sary an'i Nevin Thompson.
Na ao amin'ny firenena, na any ivelany, ny fitantanan'i Abe dia voatsikera foana noho ny tsy fisian'ny fahatsiarovantenany ara-tontolo iainana sy noho ny fitrandrahany tsy misy antra an'ireo loharano voafetra. Nandritra ny fahavaratra, raha ireo mpiara-miasa amin'i Abe nifampiresaka tamina fiteny miafina natao tamin'ny fomba mihaja, ny ambiny teo amin'ny firenena kosa nanomboka nitaky valiny iray tsara kokoa amikasika ireo loza voajanahary izay toa efa zary mahazatra ao Japana amin'izao fotoana izao. Ilay horohorontany tamin'ny volana Jona nahafatesana olona dimy tao Osaka no nanokatra ny fanombohan'ny vanimpotoan'ny rivodoza tsy mbola nisy toa azy, ireo tondradrano goavana ary ireo rivodoza nandravarava ka namafa ny ampahany goavana tamin'ny faritra andrefan'i Japana, nandritra ireo telo volana farany. Tsy afaka nampiasaina nandritra ny andro maromaro ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Kansai, ilay seranana faharoa lehibe ao amin'ny firenena, noho ny tondradrano goavana tao amin'ny làlana fisidinana sy noho ny fihotsahan'ny tetezana iray.
Fanaovana ho laharam-pahamehana ny fiovan'ny toetrandro
Na nanoloana ny fiovaovàn'ny toetrandro tsy azo nihodivirana tao Japàna aza, nijanona hatrany nifantoka tamin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020, ny fanavaozana ny lalàm-panorenana ny fitantanan'i Abe, ary mazava loatra, ny fitomboana ara-toekarena. Raha marobe ireo kiana momba ny fandraisana ny Lalao Olaimpika amin'ny Aogisitra noho ny haavon'ny maripàna ambony be sy ny hamandoana, ny antoko LDP misy an'i Abe kosa nianiana ny hitazona ny toejavamisy amin'izao endriny izao, satria ny fanovàna ny fandaharam-potoanan'ny lalao dia mety hisy fiantraikany ara-toekarena amin'i Japàna. Toerana maneso io raha tarafina avy amin'ireo Lalao Olaimpika Tokyo 1964 natao ny volana Oktobra, fony mbola notanterahina ireo fetibe ara-panatanjahantena Japoney nentindrazana (undokai)
Ny fiovaovàn'ny toetrandro (kiko hendo) sy ny fihafanàn'ny tany (ondanka) dia fiteny mahazatra ny Japoney, mazava loatra, saingy ireo anton'ny fiakaran'ny maripàna no tsy ampy tsara ny fampifandraisany azy amin'ny firoboroboana ara-toekarena natao gaboraraka ary ny hatendan-kanin'ireo orinasa. Taompolo roa lasa izay, nipetraka ho firenena tomponandraikitra i Japàna tamin'ny nanolorany ny Fifanarahan'i Kyoto, saingy noho i Abe sy ny tariny mpitahiry ny nentindrazana amin'ny endriny vaovao tonga nandray ny fitantanana, dia laharam-pahamehan'ny antoko ny nitodika bebe kokoa tamin'ny fifanakalozana malalaka sy tsy dia misy teritery tamin'ny fitomboana ara-toekarena. Na teo aza ny vinan'ny antoko LDP hoe ‘hamerina an'i Japàna amin'ny haavo ara-toekarena nisy azy fony vanimpotoana tany alohan'ny naha-tao anaty balaonina azy, vao mainka mihalalina sy sarotra odian-tsy jerena ny hantsana eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra
Aleo firoboroboana ara-toekarena toy izay tontolo iainana
Avy amin'ny vinaviana hoe mety halaky be ny fielezan'ny tazo mahery sy ny ‘dengue’ rehefa hiakatra degre vitsivitsy ny maripàna, mankamin'ny eritreritra mbola mandravarava kokoa hoe ho lasa Nosy tsy azo honenana ny nosy Honshu raha tsy hoe atoka-monina ireo mponina ka hidiana anatina tranobe tsara rivotra foana, angamba ny valiny tena mahazatra indrindra ao Japana dia ny fitazonana fisalasalàna anaovana be didoha, na ny fanaingàna soroka sy ny fanononana ny fehezanteny miverimberina hoe shikataganai (tsy misy azo atao intsony).
Toy ny any amin'ireo firenena Eoropeàna sy Amerikàna Tavaratra, marobe ireo olompirenena ao Japàna no toa mihevitra hoe ireo andiantaranaka tsy nisaina afa-tsy ny asa nefa efa misotro ronona ankehitriny, fantatra amin'ny hoe dankai sedai, dia nahavitra zavatra nampitolagaga tamin'ny toekarena nohon'ny nanorenan'izy ireo indray ny firenena iray navela tanteraka tao anaty faharavan'ny ady. Ny tsy voajery dia ny zavamisy hoe io ‘zava-nahagaga’ io dia nateraky ny fampiroboroboana ny fiangaly fiaina tafahoatra nifototra tamin'ny fanjifàna tafahoatra izay – satria mitohy mitombo ny isan'ny mponina erantany ary miha-ritra ny loharanonkarena voajanahary, simba na potika – mazava fa tsy haharitra. Mety hilaza ny olona iray hoe ny fampidirana ny resaka tafika tao Japàna tany amin'ny fiandohan'ny vanimpotoana Showa no nanefy tsotra izao ny fahafoizantena nirehidrehitra ho amin'ireo fotokevitra momba ny firoboroboana ara-toekarena.
Inona no hoeritreretin'ireo taranaka ho avy?
Ahoana no ho fitsaran'ireo taranaka ho avy an'ireo “Abenomics” amin'ny farany, izay nanome vahana ny fitomboana ara-toekarena fa tsy ny tontolo iainana natoraly? Hanefa be noho ny namoronany tsy fitoviana goavana ara-toekarena lehibe kokoa ve ireo orinasa japoney, raha sady mitaky fanalavàna ora amin'ny asa, na lahy na vavy, na mpitovo na manambady ary ijerena ireo adidy ara-pianakaviana, nefa karama vary masaka no setriny? Ho sanda azo ekena ho an'ny fitomboana ara-toekarena ve ny fandringanana tanteraka an'ireo karazam-biby marobe sy zavamaniry tato anatin'ny taompolo vitsivitsy monja?
Na ho an'ny firenena izay mifikitra amina tsy fanetsehana na inona na inona aza, dia misy fihetsiketsehana tsindraindray. Nandritra ny fanombohan'ny Fameranana ny Meiji tamin'ny faran'ny andian-taona 1860, ary koa nialoha sy taorianan'ny Ady Lehibe II, nisy ireo fotoana sarotra rehefa nokianin'ny vahoaka ho hamotika tanteraka ny lamba sosialy ireo japoney mpitondra sy ireo goaibe ara-toekarena.
Hisy fotoana iray ve hidina an-katezerana eny an-dalambe ireo taranaka tanora ka hanohitra ireo loza ateraky ny fanjifàna tafahoatra?